Handuan | Qalabka sameeyaha Alwaaxa Gaarka ah
MUQDISHO SHARAX KIISAN
Qaabka aaladaha sameeya alaabta guriga ayaa inta badan loo qaybiyaa qaab casri ah iyo qaab Iskandaneefiyaanka ah Shirkaddu had iyo jeer waxay isticmaashay alaab ceeriin oo tayo sare leh oo si taxaddar leh ayaa loo xushay, shuruudaha farsamada ayaa loogu talagalay heer sare.
Qalabka Guryaha Lagu Sameeyo
Naqshad Casri ah oo Casri ah
Albaabka ugu wanaagsan ee ugu wanaagsan ee ka sareeya ee ka sareeya ee ka sareeya wakaaladaha waqooyiga qaaliga ah ee Yurub
Albaabka ugu sareeya ee casriga ah ee ka sareeya golaha waqooyiga raaxadaSheyga ayaa dammaanad qaaday badbaadada. Nidaamyada nabdoonaanta ee la dhisay, sida ilaalinta aad u badan, ilaalinta xad-dhaafka ah, iyo qufulka nabdoonaanta, hubi hawlgalka nabdoon.Guluaan wuxuu ugu fiican yahay albaabka sahlan ee ugu sareeya ee wakaalada waqooyiga ee Yurub
Miiska qaxwaha shaqeeya
Miiska qaxwaha shaqeeya.
Miiska sariirta jiifka
Miiska sariirta jiifka.
Baadhitaanka wax soo saarka iyo horumarinta, shirkaddu waxay leedahay xirfadle iyo heer sare R
Kooxda D, isku-darka R& D, wax soo saar iyo iib.
Waxyaabaha ay soo saarto shirkadda waxaa ka mid ah taxanaha taxanaha ah, taxanaha qolka fadhiga, taxanaha qolka cuntada, silsiladaha isku dhafan ee carruurta, xirmooyinka hudheellada injineernimada, iyo xirmada guryaha oo dhan. Soosaarida ugu weyn waa taxanaha alaabada jiifka alwaax, oo ay kujiraan sariir laba jibbaaran iyo labis alwaax ah. Qaabka wax soo saarka shirkadda ayaa inta badan loo qaybiyaa qaab casri ah iyo qaab Nordic ah. Shirkaddu had iyo jeer waxay isticmaashaa alaab ceyriin oo tayo sare leh waxayna soo martay xulasho taxaddar leh, kaamil ahaanshaha shuruudaha farsamada gacanta, oo leh qaabkeeda naqshadeynta gaarka ah, farshaxan wanaagsan, iyo adeeg daacad ah, waxay ku guuleysatay macaamiisha, waxay ku guuleysatay in ka badan toban muuqaal qaran iyo naqshad cusub shatiyadaha, oo noqday naqshadda asalka ah ee wax soo saarka warshadaha Hogaamiyaha.
45 maalmood soo noqosho
90 maalmood kaydinta bilaash ah
250 qeybinta magaalooyinka
Foshan Handuan Furniture Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2012.
Waxay ku taalaa Lecong, Shunde, Foshan, Guangdong, China, taas oo ah saldhiga wax soo saarka alaabta adduunka ugu weyn. Aqoon isweydaarsiyo heer sare ah oo casri ah iyo koox shaqaale tayo sare leh, ayaa hadda leh saldhig wax soo saar casri ah oo gaaraya 10,000 oo mitir murabac ah, shaqaalaha hadda jira oo ka kooban 100 qof, shirkaddu waxay soo bandhigeysaa sumado caan ah oo gudaha ah iyo qalab kale oo khadka wax soo saar si loo hubiyo ilaalinta tayada wax soo saarka Marka la eego duruufaha lagu dhasho, shirkaddu waxay leedahay R xirfadle ah oo wanaagsan
Kooxda& D, wax soo saar iyo iib.
Noocyada wax soo saarka ee shirkadda ayaa badanaa loo qaybiyaa qaabab casri ah iyo qaababka Nordic. Alaabta jiifka ee alwaaxda kulul waxay ka kooban yihiin sariir laba-jibbaaran oo alwaax ah iyo armaajo alwaax ah. Shirkaddu had iyo jeer waxay isticmaashay alaabo ceeriin oo tayo sare leh oo si taxaddar leh loo xushay. Shuruudaha geeddi-socodku waa heer sare, iyo qaabkeeda naqshadeynta gaarka ah, farshaxanimada wanaagsan iyo adeegga daacadda ah ayaa ku guuleystey inta badan macaamiisha la doorbiday, waxay ku guuleysteen in ka badan toban muuqaal qaran iyo nashqadeynta nashqadeynta adeegga, waxayna noqdeen hoggaamiye qaabeynta asalka ah ee wax soo saarka warshadaha.
U hoggaansanaanta fikradda hoggaamineed ee ergonomiska, caafimaadka iyo ilaalinta deegaanka.
Sariir Heer Xirfadla leh sariir sariirood sariir sariirood iskudhaf sariir cunug sariir sariir sariir sariirta sariirta sariirtiisu sarreyso
Handuan oo ku taal No.19, Kangtai South Road, block B, Shatou Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City Main Products Sariirta dhererka leh sariirta sariirta lagu ilaaliyo ee sariirta ilmaha isku dhafan sariirta ilmaha sariirta sariirta sariirta yar ee sarifka leh. Handuan waa la soo saaray iyadoo la adeegsanayo xoogga farsamo ee xoogan, qalab casri ah. Waxay leedahay dhar adag oo waara oo ilaaliya dhalaalka iyo qaabka si loo hubiyo in la dhammeeyo raadinta qolka jiifka iyo hurdo habeennimo oo farxad leh. Handuan waxaa laga tijaabiyey xasiloonida cabbirka, waxqabadka iyo xawliga midabka si loo buuxiyo shuruudaha sharciyeed ee warshadaha gogosha.
Miiska miiska yar ee miiska buug-yaraha miiska casriga ee miiska kombiyuutarka ee isku-dhafan Nordic miiska kombuyuutarka iyo isku-darka kursiga ee alaabta lagu barto
Handuan oo ku taal No.19, Kangtai South Road, block B, Shatou Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City Main Main Waxyaalaha miisaska yar ee miiska buug-yaraha miisaska miiska kombuyuutarka ee miiska kombuyuutarka guriga Nordigga iyo kursi isku dhafan oo isku dhafan. Foshan Handuan Furniture Co., Ltd. waxay u isticmaashaa tayo sare sida maaddada ugu weyn. Wax soo saarku wuxuu leeyahay kalsoonida la doonayo. Guryaheeda adag waxay qaataan waxyaalaha waxqabadka sare leh iyo qalabka dahaarka si looga hortago wax gariir ah. Handuankeena waxaa lagu soo saari karaa qaabab kala duwan oo naqshadeyn ah iyo qeexitaanno.